Sidee Waxaad u bedeli karaan MP4 in Windows Movie Kan sameeyey socon Files
Weli ma kugu dhaceen degida files MP4 in aad Windows Movie Kan sameeyey, laakiin markaas si lama filaan ah u joojiyo shaqeeya ama aad file kaliya ma garan karaa ku Kan sameeyey Windows Movie? Waa hagaag, waxaad u leedahay in aad ogaato in aadan ahayn qofka kaliya ee ay soo food saartay dhibaato ah, run ahaantii, wax badan oo dadka isticmaala Windows Movie Kan sameeyey waxay wajahayaan dhibaatooyin la mid ah.
Sababta ugu weyn ee waayo, kanu waa in qaab MP4 video ma noqon kartaa mid taageero Windows Movie abuuray. Waxyaabaha aad ogaanaysid Waa waa in Windows Movie Kan sameeyey kaliya taageero: .wm, .mpe, .mpg, .mpeg, .asf, .mp2v, .mp2, .m1v, .avi, iyo .wmv.
Ha isku dhibin! Waxaa weli aad samayn karto! Sidaas, haddii video ah in aad rabto in aad soo dhoofsadaan in Windows Movie Uumahaaga ayaa qaab MP4, ikhtiyaarka kaliya ee aad leedahay waa in loogu badalo file video in qaab kasta oo kor ku xusan. Diinta videos ama file warbaahinta kasta oo qaab kale ma aha run ahaantii wax ay adag tahay in la sameeyo. All inaad samayso waa si aad u hesho a video Converter kalsoonaan karo oo lagu sameeyo shaqada, mid ka mid ah software ugu kalsoonaan karo in samayno waa Video Converter Ultimate Wondershare in aad kala soo bixi kartaa si maxkamad loo saaro. Tani software cajiib ah u bedeli karaan video tayo sare leh si ay u qaab kasta oo aad rabto in aad la aqoonsan Windows Movie abuuray. Intaa waxaa dheer A weyn Timid barnaamijkan waa qalabka tafatirka video aasaasi ah oo aad u isticmaali karto ee ka caagan-u-habeynta iyo kor video.
Qaybta 1aad: Sida loo Beddelaan iyo MP4 Import in Windows Movie Kan sameeyey la Wondershare Video Converter Ultimate
Qeybta 2: An Optional Online Free Video Converter talinayo
Qeybta 3: Shan kale Free Video converters talinayo
Hoos waxaad ku baran doontaa sida loo badalo file MP4 si aad u qaabab kale in la jaanqaadaan Windows Movie abuuray.
Tallaabada 1 dar MP4 File
Waxa ugu horeeya ee ay tahay in aad samayso waa in ay soo baxdo iyo rakibi Wondershare Video Converter Ultimate si aad u computer ama laptop. Waxaad kala soo bixi kartaa software this oo bilaash ah sida maxkamad ama ku iibsanayo Times 1 sano, software tani waa labada diyaar u Windows iyo Mac isticmaala. Markii geeddi-socodka lagu sameeyo, abuurtaan software Wondershare Video Converter Ultimate iyo dar faylka aad rabto in aad si loogu badalo adigoo gujinaya dar Files .
Tallaabada 2 Dooro Qaabka Output ah
Dhinaca midig ee suuqa, guji liiska qaab iyo dooran qaab aad rabto in aad file loo rogo, si loo hubiyo in ay tahay la jaan qaada Windows Movie Kan sameeyey, dooran wmv. Waxa kale oo aad ka bedeli kartaa saldhig oo aad video, sida heerka yara, xal, iyo kuwa kale, waxaad u samayn kartaa adigoo gujinaya button Settings aad arki karaa qaybta hoose ee suuqa.
Tallaabada 3 Finish Wareejinta
Markii wax walba u muuqataa mid wanaagsan, riix badhanka badalo iyo qaab beddelidda Markaasaad bilaabi doonaa. Wareejinta waxaa badanaa kuma qaadan aad u dheer; Si kastaba ha ahaatee, muddo markii ugu had iyo jeer ku xiran tahay tirada file ah in aad doonaysid in loogu badalo.
Tallaabada 4 Import ku Video badaley File in Windows Movie Kan sameeyey,
Fiiro gaar ah: The badhamada ee Windows Kan sameeyey Movie iyo Windows Live Movie Kan sameeyey waa wax yar oo kala duwan!
Keenista aad video diinta Windows Movie sameeyey,
Marka aad hore u samaysay diinta aad video, abuurtaan Windows Movie Kan sameeyey, oo guji badhanka Import ama Import Video ku saabsan qayb ka bidix ee shaashadda iyo folder file la pop baxay, dooran file aad rabto inaad ka soo dhoofsadaan. Waxa kale oo aad ku samayn kartaa file u soo jiiday ka ah folder file furan iyo tagtey in ay ka software Kan sameeyey Windows Movie.
Keenista aad video diinta Windows Live Movie sameeyey,
Burcad Windows Live Movie Kan sameeyey, oo markaas waa inay Home tab ku yaalla menu qoofalan iyo dooran dar video aad ka arki kartaa in guddi ku dar, markaa ka heli iyo doorato faylka ama video aad rabto in aad soo dhoofsadaan.
Haddii kale, waxaad isticmaali kartaa online video Converter oo lacag la'aan ah si aad u hesho faylka badaley si la mid ah. Waxa si fudud oo ka hawl gaaro natiijada ugu fiican.
Tani waa mid ka mid ah barnaamijyada video Converter ugu kalsoonaan karo maanta. Waxaad kala soo bixi kartaa software this oo bilaash ah sida maxkamad ama ku iibsanayo Times a 1 sano, software tani waa labada diyaar u Windows iyo Mac isticmaala.
Tani waa mid kale Converter video in aad kala soo bixi kartaa lacag la'aan ah. Tani waa mid aad u fudud in la isticmaalo, kaliya aad u baahan tahay in ay doortaan faylka aad rabto in aad si loogu badalo, qaab wax soo saarka, baaxadda iyo codec aad rabto, iyo waxa lagu sameeyey!
Converter video kani ma aha mid la heli karo ee kombiyuutarada Windows. Waxaa la og yahay ay shaqo u samayn wanaag. Waxaa ku taageeri kartaa wax badan oo qaabab kala duwan oo aanu gelin wax watermark dhibsado aad video on.
Tani waxay gaar video Converter waa heli kara oo keliya dadka isticmaala Mac. Tani waxay kuu ogolaaneysaa in aad si loogu badalo file video wax kasta files aad u baahan tahay. Its interface fudud u oggolaan doonaa in aad isticmaasho barnaamijkan oo aan isticmaalka wax Hanuuniyaa ama tutorial.
5. Clipconverter (Converter Online)
Tani waa online video Converter ah in aad sidoo kale u isticmaali kartaa, taasi waxay kuu ogolaanaysaa inaad record, diinta, iyo kala soo bixi files ee ku dhow qaabab kasta oo suurtagal ah. Waa lacag la'aan ah, dhakhso ah, oo si sahlan ay u isticmaalaan. Waxaad kala soo bixi kartaa oo aanay u videos si toos ah uga YouTube ama vimeo waqti isku mid ah.
Sida loo bedelaan MKV in AVI
> Resource > Beddelaan > MP4 in Windows Movie sameeyey, Sidee Waxaad dajiyaan karaa MP4 in WMM